ကိုကျော်သူ ရဲ့ ရှင်းတမ်း ~ Nge Naing
Thursday, February 04, 2010 ဒီရေ 18 comments
February 4, 2010 at 6:02 PM Reply
February 4, 2010 at 6:03 PM Reply
ဦးကျော်သူနဲ့ အဖွဲ့သားများအားလုံးကိုရော၊ အယူသီးမှုများကို လက်တွေ့ကျကျ တိုက်ဖျက်နေသူများကိုရော ရင်ထဲက လှိုက်လှိုက်လှဲလှဲ လေးစားမိပါတယ်။
တကယ့်ကို မွန်မြတ်ပြီး စေတနာ သဒ္ဒါတရားများတဲ့ လူကောင်းတွေပါပဲ ကျနော်တို့ တိုင်းပြည်မှာ သူတို့လို လူမျိုးတွေ များလာရင် ဘယ်လောက် ကောင်းလိုက်မလဲ ကျနော်လဲ ပြုပြင်သင့်တာတွေ များနေပြီး)
February 4, 2010 at 7:16 PM Reply
ဒီပို့စ်ကို မောင်လေး ကိုဒီရေက တင်ထားပေးတာပါ။ သူ့ဘလော့ဂ်မှာ သွားဖတ်ပြီး ဘလော့ဂ်မှာလည်း ပြန်ဖေါ်ပြရင်ကောင်းမယ်လို့ တွေးနေတုန်းပဲ ရှိသေးတယ်။ သူက တင်ထားပေးပြီးနေပြီ။ ဒီပို့စ်ကို တင်ပေးတဲ့ ကိုဒီရေ၊ ပို့စ်ကို ရေးတဲ့ ပို့းကိုရေးတဲ့ ကိုကျော်သူ၊ လာရောက် ဖတ်ရှုပြီး မှတ်ချက်ပေးသွားကြတဲ့ Anonyous, ဇွန်မိုးစက်နဲ့ တောင်ပေါ်သားတို့ အားလုံးကို ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။
မြန်မာပြည်မှာ ဒီလိုအမှုမျိုးကို အောက်ကျနောက်ကျ ဖြစ်တယ်လို့ သဘောထားတဲ့ အယူသီးမှုတွေကို တောဘက်မှာပဲ ရှိတယ်လို့ ထင်နေတာ မြို့ပေါ်မှာလည်း ရှိနေပြီး တရားဥပဒေဆိုတာကို မတရား အသုံးပြုပြီး ဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီး ဒဏ်ငွေရိုက်တဲ့အဆင့်ထိ ဖြစ်နေတာကို ဓါတ်ပုံနဲ့တကွ တွေ့ရတော့ တကယ်ပဲ အံ့သြမိတယ်။ ဒီလောက် အယူသည်းနေတဲ့ လူမှုပတ်ဝန်းကျင်မှာ ဒီအယူသီးမှုတွေကို တွန်းလှန်ပြီး ကုသိုလ်ပြုနေကြတဲ့ ကိုကျော်သူနဲ့ အဖွဲ့၊ ဒီထဲက မင်္ဂလာ စုံတွဲတွေရဲ့ ကုသိုလ်တွေကိုလည်း ကျွန်မ လှိုက်လှိုက်လှဲလှဲ သာဓု ခေါ်ပါတယ်။
February 4, 2010 at 9:51 PM Reply
အမရေ.. ကျွန်တော်လည်း Face book မှာတွေ့ လို့ ပြန်ဖော်ပြဖို့ ခွင့်တောင်းထားပါတယ်.. အကြိုက် ခြင်းတူတဲ့ကျွန့်တော့အမ... မိသားစုနဲ့ ထာဝရ ပျော်ရွှင်နိူင်ပါစေဗျာ...
Thank you for sharing this. you can also read other article of Ko Kyaw Thu here http://www.facebook.com/pages/Kyaw-Thu/174427511697
February 4, 2010 at 10:06 PM Reply
အင်း အယူ အယူ ဗုဒ္ဓဘာသာတွေ ယူကြတာ များတယ်
February 4, 2010 at 10:47 PM Reply
စာဖတ်ရတာ စာလုံးတိုင်းဆီမှာ အားမာန်တွေ အပြည့်နဲ့ပါပဲ။ မကြာတော့တဲ့ကာလ တခုမှာ ကိုကျော်သူတို့ရဲ့ လုပ်ငန်းတွေ ဒီ့ထက် ပိုအောင်မြင်လာမှာပါ။ အယူဝါဒ ဆိုတာ ဒီလိုပဲ တဖြည်းဖြည်းတိုက်ဖျက်ရတာပါပဲ။
ပို့စ်တင်ပေးတဲ့ အမလည်း ကျေးဇူးပါဗျာ
February 4, 2010 at 10:49 PM Reply
အေးဗျာ လူတွေဟာ ခက်တယ်ပေါ့။
February 4, 2010 at 11:31 PM Reply
အကျိုးရှိတဲ့ပို့စ်လေးမို့ ကျွန်မလည်း ဘလော့ဂ်မှာ သိမ်းထားချင်တာနဲ့ ပြန်ဖေါ်ပြဖြစ်တာကို လာဖတ်ကြတဲ့ မောင်နှမတွေ အားလုံးကို ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ တခြားသူတွေကိုလည်း ညွန်းပေးလိုက်ပါနော့်။
မောင်လေးရဲရင့်နီရေ - ဒီပို့စ်ကို မောင်လေး ဘလော့ဂ်မှာ ပြန်ဖေါ်ပြဖို့ HTML လိုအပ်ရင် ကိုဒီရေကိုသာ မေးကြည့်တော့နော့်။
Anonymous ရေ ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ ကျွန်မ ဒီနေ့ပဲ ကိုကျော်သူ Face book စာမျက်နှာကို ၀င်ဖတ်ဖြစ်ပါတယ်။
ဂျေဂျူပိုင်ပြောတာ အဟုတ်ပဲ။ ဘုရားဟော မဟုတ်ဘဲ ဘုရားဟော လုပ်နေတာလည်း အများကြီး ရှိပါတယ်။
မြစ်ကျိုးအင်းရေ အဲဒါ အစ်မတင်ထားတာ မဟုတ်ဘူး။ အစ်မက ပြန်ဖေါ်ပြဖို့ စဉ်းစားတုန်းပဲ ရှိသေးတယ်။ ကိုဒီရေ လာတင်သွားပေးတယ်။
နွေဆူးလင်္ကာရေ ခက်တာကတော့ ခေါင်မိုးကနေ ကြမ်းပြင်အထိ ကြီးစဉ်ငယ်လိုက်ကို ခက်နေကြတာ အမှန်ပဲ။
February 5, 2010 at 3:41 AM Reply
February 5, 2010 at 4:27 AM Reply
ကိုကျော်သူ့ ဖေစ့်ဘွခ်မှာတွေ့လို့ မန့်ထားပီးပါပြီ ... အခု အမပြန်တင်ပေးတာလဲ ကျေးဇူးတင်ပါတယ် လူတော် လူကောင်းတွေကို ၀ိုင်းရံရမှာက လူယဉ်ကျေးတွေရဲ့ တာဝန်ပါဗျာ ..
February 5, 2010 at 4:00 PM Reply
စစ်အုပ်စုဖက်ရ့ပ်တည်ချက်တွေပါ ။။နိုင်ငံရေးလုပ်နေသူတိုင်းတော့ အကော်ဒီယံအုန်းကျော်ဘာကောင်လဲဆိုတာ သိသူတွေကြည့်မို့ ကျမ အကျယ်တ၀င့်မရေးလိုက်မိတာဆောရီးပါ ။ ခုလို ဝေဖန်တာ ဖြစ်သင့်တဲ့အတွက်ကျေးဇူးပါ --သေချာတာတော့ အကော်ဒီယံအုန်းကျော် က ဒီသီချင်းကို သီးချင်းဆိုတက်လို့ဝင်ဆို တာပဲ ဖြစ်ပါတယ် ။မေဆွိလည်းဆိုတယ် ။မေခလာလည်းဆိုတယ် ။ ဆိုတက်သူတွေအားလုံးအဲဒီအချိန်မှာ နိုင်ငံတစ်ဝှမ်း သီဆိုခဲ့တာပါ။သီချင်းကတော့ လွတ်လပ်ရေးခေတ်ထဲက တကသ သီချင်းဖြစ်ပါတယ်
February 5, 2010 at 5:16 PM Reply
အမရေ...ဖြူတို့ လည်းပြင်သင့်တာပြင်ရမယ်နော်။ဒါပေမဲ့တိုက်ဆိုင်လို့ ပဲလား။လူတွေရဲ့ အစွဲကြောင့်လားမသိဘူး။အဖြစ်ပျက်လေးတွေကအနီးစပ်ဆုံးဖြစ်တတ်ကြလို့ ထင်တယ်.ဖြူအဘွားဆိုတော်တော်အယူသီးတာ။နည်းနည်းဆိုရှေးထုံးလည်းမပယ်နဲ့ ဆိုတာကြီးပဲ။ညီမလေးကတော့ဒီနေ့ ကောင်းတာလုပ်ရင်ဒီနေ့ ကမင်္ဂလာပဲ။အမရောညီမအမြင်ကိုသုံးသပ်ပေးပါအုံး
KO Kyaw Thu's 1st quote was originated by Henry David Thoreau (1817-1862), Anerican Author.
February 6, 2010 at 8:30 PM Reply
ပြတ်ပြတ်သားသားနဲ့ အားလုံးကို ရင်ဆိုင်ရဲတာ သဘောကျတယ်...
အယူသီးတယ်ဆိုတာကလည်း အယူသီးအောင် လုပ်ယူနေသူတွေ များလာလို့နဲ့ တူပါရဲ့...
February 9, 2010 at 4:05 AM Reply
မဟုတ်မခံ ။ ဟုတ်တာကို မကြောက် မရွံ့ လုပ်တတ်တဲ့ ကိုကျော်သူလို လူမျိုးများများရှိဖို့လိုအပ်နေပြီ မငယ်နိုင်ရေ ....